China Linaclotide fekitari uye vagadziri | JYMed
Product Name: Linaclotide
Molecular uremu: 1526,8 g / mol
Kushandisa: Used kubata tsamwa bowel chirwere pamwe kupatirwa uye chisingaperi kupatirwa asina kuzivikanwa chikonzero
Chitarisiko: chena upfu
Application: kushandiswa okurapa kupatirwa
Nhuri: maererano mutengi wacho zvaanoda
ProductionCapacity: 1 Kilogram / Month
Storage: 2 ~ 8 ℃. kudzivirirwa kubva chiedza
fanano: Linaclotide Acetate
Molecular Weight: 1526,8
urongwa: NH2-Cys-Cys-Glu-Tyr-Cys-Cys-Asn -Pro-ala-Cys-Thr-Gly-Cys-Tyr-OH
Linaclotide chinhu chakaita zvokugadzirwa, gumi nemana amino iine acid peptide uye agonist pamusoro intestinal guanylate cyclase mhando C (GC-C), izvo zvayakaita akarondedzera guanylin peptide mhuri, pamwe secretagogue, unonyaradza marwadzo uye laxative mabasa. Pamusoro zvokuudzwa nomuromo Kutarisirwa, linaclotide runokusunganidzai uye zvaanopa simba GC-C receptors iri luminal penyika intestinal epithelium. Izvi zvinowedzera wevasungwa pamusoro intracellular cyclic guanosine monophosphate (cGMP), iro rinobva guanosine triphosphate (GTP). cGMP zvaanopa simba ari cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) uye zvinoita secretion kuti chloride uye bicarbonate munzvimbo intestinal lumen. Izvi kunosimudzira yavaibvisa excretion kupinda lumen uye kunoguma yakawedzera intestinal mvura mvura secretion. Izvi pakupedzisira Inowedzera GI dzaifanoiswa pamusoro intestinal mukati, kunonatsiridza bowel kufamba uye anobatsira kupatira. Inosimudzira extracellular cGMP zvese zvinogona vanoshandisa antinociceptive zvazviri, kuburikidza kwakaita asi kwete zvakazara elucidated mashandiro, kuti kungasanganisira vachisiyanisa inzwi pakati nociceptors zvakawanikwa colonic afferent marwadzo fibers. Linaclotide iri zvishoma woga kubva GI turakiti.
Previous: Thymosin β4
Next: Degarelix acetate
Linaclotide Acetate ekisipota
Linaclotide Acetate Gmp ekisipota
Linaclotide Acetate Gmp nokutengesa
Linaclotide Acetate Manufacturer
Linaclotide Acetate nokutengesa
Linaclotide Gmp Provider From China
Linaclotide Gmp nokutengesa From China